आहा पाल्पाः इतिहास र गौरव – Palpa Samachar
पर्यटन भित्र ऐतिहासिक सम्पदा पनि हुन्छ । पाल्पाको भैरवस्थान, रुरु र अर्गली क्षेत्र तीर्थाटन एवं ऐतिहासिक खोज अनुसन्धान गर्ने पर्यटकहरुको लागि महत्वपुर्ण स्थल भएको छ । प्रदेश नम्वर ५ मा पर्ने पाल्पाका ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरु अहिले पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास हुन थालेका छन । तानसेनको श्रीनगर, अग्रेजसंगको लडाइमा विजयको उत्सवमा उजीर शमसेरले निर्माण गर्न लगाएका भगवतीको मन्दिर, खडक शमसेरद्धारा हावाखान र सैनिकहरुको जमघट गराउन निर्माण गरिएको शितलपाटी, एशियाकै ठुलो मानिने काठबाट निर्मीत शितलपाटीको मुलढोका, अमरनारायणको मन्दिर, दरवार जस्ता ऐतिहासिक स्थलले पर्यटकहरुका लागि अध्ययन अनुसन्धान र दृष्यावलोकनका स्थलहरु वनेका छन ।
नेपालमा विभिन्न समयमा राज्यहरुको विस्तार र विलयको क्रममा सेनवंशको नाम आउँछ । भारतका चितौर र सिसौदियाका राजपुतहरुको सन्तानको रुपमा चिनिएका सेनवंशी राजाहरुले आफ्नो शासनको समयमा धार्मीक, राजनीति र कुटनीतिको परिचय दिएका थिए । जुन इतिहास पुरातात्विक सम्पदा पर्यटकहरुका लागि अध्यन अनुसंन्धान र अवलोकनस्थल भएको छ । विक्रम सम्वत् १५७५ देखि १६१० सम्म पाल्पामा मणिमुकुन्द सेनले शासन गरेका थिए । त्यस बेला पाल्पा राज्यको राजधानी भैरवस्थानमा थियो । राजा मणिमुकुन्द सेनले कालीगण्डकी नदीमा स्नान गर्दा ऋषिकेशको शिलाले निधारमा ठोकिन पुग्यो । त्यर्सै दिन राती सपनामा स्नान गर्दा ठोकिएको शिला मेरो हो । म विष्णु भगवान हो । मलाई कालीगण्डकी आसपासमै मन्दिर बनाएर राख र सेवा गर भने पछि मणिमुकुन्द सेनले भेटिएको शिलालाई कालिगण्डकी र रिडी खोलाको संगम स्थानमा ऋषिकेश मन्दिर निर्माण गरेका हुन ।
नेपालमा हिन्दुका चारधाम अर्थात चार मुख्य तीर्थस्थलमध्येको रुरु क्षेत्रको पौराणिक इतिहास र महत्व धेरै छ । पाल्पा, गुल्मी र स्याङजा जिल्ला सिमाक्षेत्रको विचमा पर्ने रुरुक्षेत्र तीर्थाटनको लागि मात्र नभएर इतिहास र पुरातात्विक अध्यनको लागि पर्यटकहरु पुग्ने गर्दछन् । रुरु क्षेत्रमा देवदत्तमुनिले तपस्या गरी शिवत्व अर्थात् अष्ठसिद्धि प्राप्त गरेका थिए । उनकी सुपुत्री रुरु कन्याले पनि यही तपस्या गरी भगवान् विष्णुको प्रत्यक्ष दर्शन गरेकी थिइन् । संस्कृत भाषामा मृगलाई रुरु भनिन्छ । मृगले दुध खुवाएर हुर्काएको कन्या भएको हुनाले उनै कन्याको नामबाट रुरु क्षेत्र नाम रहन गएको हो । ऋषिकेश मन्दिरको मूर्तिलाई भगवान् विष्णुले रुरु कन्यालाई प्रत्यक्ष दर्शन दिएको साक्षात स्वरुप मानेर पूजा गर्दै आएका छन् । रुरु क्षेत्रमा देवदत्त, और्ब, वशिष्ठलगायत धेरै ऋषिमुनीले आश्रम स्थापना गरी तपस्या गरेको शास्त्रीय प्रमाण छन् । रुरु क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको धरोहर मानिन्छ । रुरु अर्थात रिडीमा पितृमोक्षका लागि अन्तिम सस्कार, श्राद्धजस्ता कार्य मात्र होइन विवाह, ब्रतवन्ध जस्ता शुभ कार्य पनि हुने गर्दछ । रुरु क्षेत्रमा मृतकहरुको अस्तु सेलाउन पनि मानिसहरु पुग्दछन ।
मणिमुकुन्द सेनले रुरुमा ऋषिकेशको मन्दिर निर्माण गरेपछि पूजाआजाको लागि अक्षता आवश्यक भयो । अर्गलीमा त्यस समयमा सबै पाखो जमिन रहेछ । मणिमुकुन्द सेन कै निर्देशनमा धान उत्पादन गर्न र ऋषिकेशको मन्दिरमा अक्षता बनाउनका लागि जोर्ते खोलाको कुलुङबाट अर्गलीसम्म ३ किलोमिटर दुरीको कुलो निर्माण भएको छ । निर्माण भएको कुलोमा करिव १ किलोमिटर लम्वाईमा कुलोमा सुरुङ रहेको छ । जुन कुलोलाई राजकुलो र जेठी कुलोको नामबाट प्रचलित छ । बिभिन्न ठाउँमा सुरुङको भाग छुट्टाएर चट्टानको बीचबाट लगिएको कुलो हेर्न आजभोली ऐतिहासिक खोजअनुसन्धान गर्न पर्यटकहरु पुग्ने गर्दछन् । स्थानिय कालगिढले उत्पादन गरेका छिनो, कोदाला र गल जस्ता औजारबाट खनिएको अर्गलीको सुरुङ कुलो आज भन्दा ४६७ बर्ष अगाडी खनिएको हो ।
अर्गलीको जेठी कुलो ऐतिहासिक हो । अहिले ऐतिहासिक कुलो अध्यन अवलोकन गर्नका लागि धेरै पर्यटकहरु पुग्ने गर्दछन् । कुलोको सुरुङमा कतिपय पर्यटक फोटो खिच्ने र सुरुङ भित्र पसेर रमाउने गर्दछन् । सयौं वर्षअघि बनेका सम्पदाको मौलिकता जोगाउन पुरातत्व विभाग र स्थानिय तह सबै लाग्नु पर्दछ । सूरुङ कुलोको इतिहास खोज अनुसंन्धान गर्नु पर्दछ । कुलो निर्माण गर्न मणिमुकुन्द सेनको निर्देशन भए पनि यो कुलो निर्माण गर्न कति समय लाग्यो ? यो निर्माण गर्न कस्ता किसिमका औजारहरु प्रयोग भएको थियो । निर्माण गर्दा मानविय क्षति भयो भएन ? कुलाको डिजाइन अर्थात नक्सा त्यो समयमा कस्ले बनायो ? यस्ता कुराहरु खोज्न जरुरी छ ।
त्यतिबेला निर्माण गरिएको एउटा कुलोको पानीले अर्गली फाटको सिंचाई सम्भव नभएपछि स्थानीय बासिन्दाहरुले पछि माईली, साइली र कान्छी कुलोको निर्माण गरेका थिए । तर पनि सबै कुलोहरुको पानी बितरण प्रणाली एउटै छ । अर्गलीमा रहेका कुलोहरुका कारणले बाह्रै महिना सिंचाईका कारण किसानहरुले राम्रो उत्पादन लिदै आएका छन् । तानसेनबाट ३० किलोमिटर पश्चिम तानसेन नगरपालिका १४ अर्गलीमा अर्गली फाट सिंचाईका लागि जेठी, माइली, साइली र कान्छी नामका ४ वटा कुलोले अर्गली क्षेत्रको २ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई गरिन्छ । यी सबै कुलाहरुमा जमिनको क्षेत्रफलको आधारमा समान रुपले पानी बितरण गर्ने बैज्ञानिक साँचो रहेको छ । यही साँचोले गर्दा नै पानी बितरणमा कहिल्यै कसैलाई बढी र कसैलाई कम भएको छैन । जमिनको क्षेत्रफलको आधारमा बढी जमिन हुनेका लागि बढी र कम जमिन हुनेका लागि कम पानी लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत बितरण हुदै आएको छ ।
इतिहास लुकेको सम्पदा सुरुङ कुलो तानसेन पुगेपछि सबैलाई हेर्न मन लाग्छ । तानसेन देखि ९ किलोमिटर पश्चिम भैरवस्थान पर्दछ । रमणिय पहाडको टुप्पोमा रहेको भैरवस्थानमा विशेष गरी मंगलबार र शनिबारका दिन तीर्थाटनका पर्यटकको भिड हुने गर्दछ । भैरव मन्दिरको मुख्य बिशेषता मन्दिरमा चढाउने रोट हो । तीर्थाटनका पर्यटकहरुले एक माना वा एक पाथी चामलको पिठोबाट बनेको रोट चढाउने गर्दछन । पिठोमा नरिवल, किसमिस, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल जस्ता मसालाहरु मिसाएर घिउमा पकाउने गरिन्छ । यसरी बनाएको रोट बटुक भैरब तथा देवीलाई चढाउने प्रचलन रहेको छ । भैरवको पूजा गर्न जाने तीर्थाटनका पर्यटकहरुले आफ्नो इच्छा अनुसारका पनि रोट बनाउन लगाउछन् ।
मुकुन्द सेन प्रथमले आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने क्रममा काठमाडौं आक्रमण गर्दा मच्छिन्द्रनाथको पटांगिनीमा रहेको भैरवको मूर्ति ल्याई स्थापना गरेका हुन । पर्यटकहरुले भैरवस्थानमा तले शैलीको मन्दिर, सेनकालीन प्रसाद ब्लाइन्ड विन्डो, राणाकालीन, मल्लकालीन स्थापत्य कलाहरु एकै ठाउँमा देख्न सक्दछन् । मन्दिरमा चारैतिर घेरिएको चोक छ । चोकमा एसियाकै ठूलो ऐतिहासिक १६ औं शताब्दी निर्माण गरिएको सुनौलो त्रिशूल र मल्लकालीन कलाले निर्माण गरिएको गजुर छ । मन्दिरको माथिल्लो तलामा भैरवको मूर्ति स्थापना गरिएको छ । मुख्य भैरवलाई हेर्न नहुने विश्वासले मूर्तिलाई मन्दिरको भुइँतलामा राखिएको छ । भुइँतलाको अर्को कोठामा कालीको मूर्ति छ । अखण्ड धुनी चल्ने भैरवको मन्दिरमा पूजा गोरक्षनाथ सम्प्रदायका योगीबाट हुन्छ ।
रिडीमा रिडी खोला र कालीगण्डकी मिसिएको छ । कालीगण्डकी र रिडी खोलाको दोभान नै रिडी अर्थात रुरु क्षेत्र भनिन्छ । रुरुक्षेत्रमा अर्घली, कुसेनी, सत्यवती, रुद्रवेणी, अस्लेवा र वेनी गाउँहरु पर्दछन । रिडी अथवा रुरुक्षेत्रको महिमा हिमवतखण्ड र वराह पुराणमा पाइन्छ । विष्णुको स्वरुप शालिग्राम पाइने हुनाले रुरुक्षेत्रको विशेष महत्व रहेको छ । रिडीमा भएका सबै मन्दिर मध्ये ऋषिकेशको मूर्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । ऋषिकेशको मन्दिरलाई वि.सं.१८१९ सालमा रणदत्त पाण्डेले पुनर्निर्माण गराएका हुन । त्यहा राधाकृष्ण, विष्णु, राम, हनुमान् लगायतका थुपै्र देवीदेवताका मूर्ति र मन्दिरहरु समेत छन् । रिडी क्षेत्रका बारेमा प्रचलित किंवदन्ती अनुसार, विष्णुले वृन्दाको सतित्व नष्ट गरेकाले स्वर्गमा तारकासुरको मृत्यु भएको थियो । त्यसबाट दुःखित भएकी वृन्दाले विष्णुलाई पत्थर भएर बस्नुपर्ने श्राप दिएपछि विष्णु शालिग्रामका रुपमा रुरुमा बसेका हुन् । त्यसै गरी देवदत्त ऋषिको तपस्याबाट डराएर इन्द्रले पठाएकी अप्सराको गर्भबाट जन्मेकी रुरुकन्याको कथा पनि यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ । रुरुकन्याको मूर्ति ऋषिकेशको मूर्तिको सामुन्ने स्थापित छ ।
रिडी नजिकै उत्तर पट्टी भृगुतुंग नामक गुफा रहेको छ । भृगुतुंग गुफामा भगवान शिबले सतीदेविका शब बोकेर भ्रमण गर्दै जादा उपल्लो दांत पतन भएको मान्यता रहेको छ । जुन श्रीस्वस्थानी महात्यम्यमा ब्याख्या गरिएको छ । त्यस ठाउमा खासगरि माघे सक्रान्ती र शिबरात्रीमामा तीर्थाटन पर्यटकहरुको भिड हुने गर्दछ । भृगुतुंग नामक गुफा स्याङजा जिल्लामा पर्दछ । रिडीमा जाने तीर्थाटनका पर्यटक गुल्मी जिल्लाको थोर्गा तर्फको भागमा रहेको गलफूलगुफा पनि पुग्दछन । गलफूलगुफा रिडी बजारबाट पाचँसय मिटर माथि रहेको छ । रुरु क्षेत्रमा साना ठूला गरेर १ सय भन्दा बढि मन्दिर र केहि गुफा पनि छन । जंहा दैनिक पूजा आजा गरिन्छ । माघे संक्रान्तिको पाँच दिनसम्म संचालन हुने रिडी मेलामा विशेषगरी स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रबाट उत्पादन गरिएको गुण किन्न पाइन्छ । रिडीको पहीचान बन्दै थोर्गेली चाकु (गुण) को लागि पनि प्रसिद्ध रहेको छ । रिडीको थोर्गामा बन्ने यो चाकु देश तथा बिदेशका बिभिन्न स्थानहरुमा निर्यात हुने गरेको छ ।
कालीगण्डकीको तटमा रहेको रिडी बजार २०१८ सालमा आएको भिषण बाढीले पुरै ध्वस्त बनाएको थियो । त्यस बेला रिडीका ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका सम्पदाहरु र ठूलो धनजनको क्षती भएको थियो । बिनास पछी बनेको घरहरु, मन्दिर, पाटी, पौवा र बगैचाहरुले रिडीलाई सौन्र्दयता दिन थालेको छ । कालिगण्डकी जलविद्युत परियोजनाले मिर्मीबाट टनेल गराएर गण्डकीको पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्न थालेपछि रिडीमा गण्डकीको पानी कम हुने र तीर्थाटन पर्यटकहरुलाई स्नान गर्न रुद्रवेनी देखि बग्दै आउने वेनी र रिडी खोलाको पानीले मात्र स्नान गर्न पर्दछ । अहिले रुरु गाउँपालिकाले कालिगण्डकीलाई जलाशय निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ । अर्को तर्फ स्याङजा,गुल्मी र पाल्पा जोडने पुल समेत बन्न लागेको छ । योजना सम्पन्न भए पछि रिडीमा तीर्थाटनका पर्यटक मात्र होइन जलाशयका रमाउने अन्य पर्यटकहरुको समेत गन्तब्य हुनेछ ।
अर्गलीमा लुकेको इतिहास
विक्रम संवत् १९९७ सालमा जुद्ध शमशेरको पालामा दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्रीको पाशविक हत्या भएको थियो । हत्याको पाप, राप र तापमा जलेका राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर बि.स.२००२ मंसिर १४ गते सिंहदरबारको शासनसत्ता छाडेर जोगीको रुप धारण गरेर अर्गेली पुगे । जुद्ध शमशेरले अंग्रेजहरुले भारत छोडदा नेपाललाई दिन चाहेको भूमि स्वीकार गरेनन् । सन् १९४२ भारतमा अग्रेजको विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि दूत पठाएर जुद्धशमशेरलाई कलकत्ता बोलाई हामी भारत छाड्दै छौं, तिमीहरुको देशको पहुँच समुद्रसम्म छैन । त्यसैले पूर्वी नाकाबाट बंगाल खाडीसम्मको भू–भाग तिमीहरुलाई सुम्पिन चाहन्छौं’ भनेछन् । तर जुद्धशमशेर उक्त प्रस्ताव आँटै नगरी फर्किएछन् । खासमा अंग्रेजहरु भारतलाई घेर्न सकिने गरी टुक्राटुक्रा पारेर जान चाहेका रहेछन् । त्यसैले नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच बनाउन भनेका रहेछन् ।
जुद्ध शमशेरले प्रधानमन्त्री पद त्याग गरी सन्यासी जीवन बिताउन रिडी बजारबाट पाँच किलोमिटर पूर्व अर्गलीमा दरबार बनाएका थिए । तानसेन–रिडी सडकखण्डको अर्गलीदेखि माथि टाकुरामा अर्गली दरबार छ । विक्रम संवत् १९९७ मा निर्माणकार्य शुरु भएको दरबारमा इँटा, फलाम, काठ, प्रस्तर एवं अन्य भौतिक सामग्री प्रयोग भएको थियो । अहिले पनि दरवारमा बाथरुम, बैठककक्ष, पल्टन राख्ने स्थान, राजाका सुसारेकक्ष देखिन्छ । दरबार निर्माणका क्रममा प्यूठान, अर्घाखाँची र पाल्पाका जनताको जनश्रमदान लगाइएको थियो । जुद्ध शमशेर अर्गलीमा रहदा कालीगण्डकीमा नित्य, स्नान गरी ऋषिकेश मन्दिरको दर्शन गर्दथिए । जुद्ध शमशेर अर्गली छाडेर भारत गएपछि ऐतिहासिक दरबार भग्नावशेषमा बदलिएको छ ।